Madaxweynaha Soomaaliya oo dadka Afgooye ku boorriyey in ay dawladda la shaqeeyaan - Sabahionline.com
Madaxweynaha Soomaaliya oo dadka Afgooye ku boorriyey in ay dawladda la shaqeeyaan Maajo 30, 2012
Madaxweynaha Soomaaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno ka mid ah golaha wasiirrada ayaa Talaadadii (29-ka May) booqday degmada Afgooye isla markaana la hadlay dadka deggan aaggaas dhawaan la xoreeyey, Wakaaladda wararka Qaranka ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Madaxweynaha Soomaaliya oo booqday tuulada Mareereey
Golaha Ammaanka ee QM oo sannad fududeeyay cunaqaybatayntii hubka ee Soomaaliya
Madaxweynaha oo ka bedbaadey isku day khaarajin ah isla maalintaa iyada ah ayaa booqday Ceelasha-biyaha iyo Calamada, dadka deegaanka ahna ku boorriyey in ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka iyo dawladda Soomaaliyeed. Weftigiisa waxaa ka mid ahaa wasiirro, xildhibaanno, iyo saraakiil sar sare oo dhinaca amaanka ah. Taliyeyaasha ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ayaa soo dhaweeyey madaxweynaha iyo weftigiisa, iyagoo aad u adkeeyey amaanka aagga, ayay werisay wakaaladdu. Madaxweynaha ayaa u mahad-celiyey ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa Midowga Afrika, guusha ay kasoo hooyeen Afgooye Muxuu kula yahay qoraalkan?